Wax ka ogow taariikhda tababare Maxamed Cabdullaahi Farayare | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Wax ka ogow taariikhda tababare Maxamed Cabdullaahi Farayare
Wax ka ogow taariikhda tababare Maxamed Cabdullaahi Farayare
Himilo FM –Magaciisa oo dhameystiran waa Maxamed Cabdullaahi Farayare waxa uu ku dhashay kuna barbaaray degmada Xamar Jajab ee gobalka Banaadir 27/12/1962-kii, Farayare waxa uu waxbarashadiisa tan dugsiga Qur’aanka iyo maadiga ku qaatay isla degmada Xamar Jajab.
Maxamed waxa uu kubadda cagta ka soo bilaabay garoomada bacaadka ee ku yiilay degmada kuwaasi oo kala ahaa iskuul Baluusiyo iyo Weekiyo, 1981-kii waxa uu tagay magaalada Jowhar ee gobalka Sh. Dhexe isla sannadkaasi waxa uu markii ugu horreysay kasoo saaray heerka guruubyada una gudbiyay heerarka xiga, waxayna wakhtigaasi ay tiigsadeen finalka inkastoo ay khasaaro kala kulmeen xulka gobalka Jubbada Hoose.
kaddib markii loogu badiyay 1-0, sanaddii 1982-kii waxa uu ka qeyb galay ciyaaraha gobalada iyaga oo mar kale khasaaro ka qaabilay Jubbada Hoose waxayna ku hareen wareegga 3aad ee tartanka gobalada.
Sannadkii 1982-kii ayuu dib ugu soo laabtay Muqdisho isaga oo ka mid noqday ciyaartoyda kooxda koowaad ee Minishiibiyo, waxa uu ka mid ahaa intii u dhaxeysay 1982-84-kii, kaddib dhaawac ka soo gaaray jilibka ayuu garoomada ugu maqnaa ku dhawaad labo sanno.
1986-kii ayuu ciyaaraha dib ugu soo laabtay, kooxda Minishiibiyo waxa uu kula guuleystay Jeneraal Daa’uud iyo horyaalka isaga oo safar ciyaaro kaga qeyb galay tartanka jaamacadda carabta oo uu xilligaasi guulo aan la qiyaasi karin ka gaaray kooxihii ka soo qeyb galay tartanka, sida kooxda ka dhisan Suudaan ee Cabaasiyiinta oo ay kaga adkaadeen 2-0.
Sannadkii 1981-kii ayaa loo magacaabay xulka qaranka Soomaaliya isaga oo markaasi u ciyaarayay gobalka Sh. Dhexe hase yeeshee waxaa arrinkaasi ka soo horjeestay maamulka ciyaaraha gobalka, Farayare ayaa mar labaad loogu yeeray xulka 1984-kii, nasiib xummo tartanka ayaa baaqday markaasi, 1986-kii ayaa markii seddexaad mar kale loogu yeeray laakiin dhaawac ayaa looga saaray, ugu danbeyn 1988-kii ayaa markii afaraad loo magacabay in uu ka mid noqdo matalayasasha xulka.
kulankiisii ugu horreeyay waxa uu Muqdisho kula ciyaaray Yemen isaga oo kulankaasi qeybta 2aad beddel ku soo galay natiijada ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 0-0, kulankii 2aad waxa uu la dheelay Yemen waxayna kaga badiyeen 2-0.
Farayare ayaa noqday laacibkii ugu horreeyay ee seddex gool ku soo dhaliya dibadda kulan caalami ah waana xiddigii labaad ee seddex gool dibadda ugu soo dhaliya xulka qaranka Soomaaliya marka laga soo tago Saciid Ducaale oo kulan saaxibtinimo seddex gool dhaliyey ciyaar ay 5-1 kaga badiyeen Yemen.
Farayare ayaa dalka isaga tagay markii uu burburka dhacay waxa uu tagay oo uu ku noolaa Itoobiya, 1998-kii ayuu mar kale dalka dib ugu soo laabtay sanaddii 2001-dii ayuu ku soo biiray saaxada tababarnimo.
Maxamed ayaa markii ugu horreysay kaaliye macalin ka noqday kooxda Elman isaga oo ugu danbeyn ku guuleystay in loo magacaabo tababaraha koowaad ee kooxda sidoo kale waxa uu leyliye ka noqday naadiga Muqdisho City oo hadda loo yaqaano Gaadiidka,waxa uu sidoo kale si mutadawacnimo ula shaqeeyay kooxda Banaadir Sports Club oo hadda loogu yeero Minishiibiyo ama Muqdisho City Club.
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa Farayare u diray waxbarasho tababarnimo oo dalka dibaddiisa ah.
Sannadkii 2005-tii waxaa loo magacaabay kaaliyaha xulka qaranka isaga oo ugu danbeyn 2007-tii loo dhiibay tababaraha koowaad ee xulka qaranka. Tababare Maxamed waa mid kamid ah leyliyaasha ugu guulaha badan xulka qaranka Soomaaliya mana jiro mid ka mudan xagga hoggaaminta tan iyo wixii ka danbeeyay burburkii dalka ka dhacay.
Previous: Haweenay iska jartay gacan si ay u hesho lacag ceymis ah!
Next: 9 jir Kenyaan ah oo hadiyad ka guddoomay Mesut Ozil